Warbixin Bileedka Sarrifka Lacagaha Qalaad ee Goobjoog Business (June, 2017)
Tani waa warbixin bileedka idaacadda ganacsiga ee Goobjoog Business oo ay bil walba ka sameyneyso dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee Soomaaliya, waxaana warbixintan ay si gaar ah u lafa-gureysaa sarrifka lacagaha qalaad ee dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xogta warbixintan oo dhan waa xog ay soo aruurisay Goobjoog Business waxaana loo soo aruuriyay si maalinla ah.
Goobjoog Business waxaa ka go’an in ay keydiso sidoo kalena diiwaangeliso xogaha dhaqaale/ganacsi ee dalka. waxaana ay ku dadaaleysaa sidii loo heli lahaa xog diiwaangeshan oo loo adeegsan karo cilmi-baarista, wax-barashada iyo qiimeyta dhaqaalaha dalka.
Goobjoog Business waxa ay isku dayi doontaa in ay buuxiso baahiyaha dad weynaha qeybahooda kala duwan hadii ay ahaan laheyd warbixinno xaqiiq ah oo ku saabsan heerka dhaqaale iyo ganacsi ee dalka.
Hadaba Goobjoog Business waxa ay kugu casuumeysaa aqrinta warbixintan oo ah warbixin billa ah oo ay bishan kugu soo gudbineyso dhaqdhaqaaqa iyo isbadalka sarifka lacagaha qalaad. Warbixintan waxaa kaliya ay diiradda ku saareysaa sarifka lacagaha ugu dhaqdhaqaaqa badan marka laga hadlayo sarifka lacgaha qalaad ee dalka.Waxaana lacagahaas kamid ah Doollarka Mareykanka, Lacagta Yuuraha, Pound-ka, Riyaalka Sacuudiga, Shilinka Kenya iyo Birta Itoobiya……………………………
Guji Linkigaan si aad u aqriso Warbixinta oo dhamaytiran